Pompeo: Wadahadallo midho dhal ah ayaa dhex maray Maraykana iyo Kuuriyada Woqooyi - BBC News Somali
Pompeo: Wadahadallo midho dhal ah ayaa dhex maray Maraykana iyo Kuuriyada Woqooyi
Hadalkiisani waxa uu soo baxay iyada oo labada dhinac ay ku kulmeen tuulada ku taalla xadka labada Kuuriya ee Panmunjom, taas oo daba socotay ballan uu qaaday hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-n.
In ka badan shan kun oo askari oo Maraykan ah ayaan ka noqon dagaalkas oo dhamaaday shan iyo lixdan sanadood ka hor.
Pompeo waxa uu sheegay in wada hadallo dheeraad ahi Isniinta dhici doonaan kuwaas oo la iskula meel dhigi doono tallaabada xigta ee la qaadayo oo ay ka mid tahay in Maraykanka lagu wareejiyo lafaha askarta ee ilaa haatan la helay ee Kuuriyada Woqooyi hayso.
Shir madaxeed ay yeeshaan Madaxweyne Trump iyo Kim Jong-un ka dib ayaa saraakiil Maraykank ahi waxay ay hore ugu socdaaleen Kuuriyada Woqooyi halkaas oo ay wadahadallo kula yeeshee dhigooda Kuuriyada Woqooyi.
Wasaaradda arimaha dibadda Maraykanka ayaa xaqiijisay in wada xaajood ka socday dhanka Woqooyiga ee magaalada Panmonjom ee ku taalla xadka labada Kuuriya u dhexeeya ee milatariga ka caaggan.